दुबई सी-स्तरमा प्रबन्धन रोजगारहरू एक्सप्याट्सको लागि मात्र होईन
दुबैमा सी-लेवल क्यारियरको लागि गाइड प्रबंधन
दुबई र अबु धाबीमा नर्सिंग रोजगारहरू
दुबई ब्लग दुबईमा नयाँ एक्सटेट्सका लागि
दुबईमा व्यवस्थापन कार्यहरू
दुबईमा ब्यबस्थापन कार्य न केवल एक्सटेट्सको लागि। दुबई सिटी कम्पनी अहिले हो म्यानपावरहरुलाई संयुक्त अरब अमीरात मा राखन को मदद। हाम्रो टोलीले ब्यवस्थापकहरूको लागि दुबईमा कार्यहरूको लागि सम्पूर्ण मार्गनिर्देशन प्रबन्धित गरेको छ। विशेष गरी वरिष्ठ व्यवस्थापन अधिकारीहरूको लागि। त्यसो भए यदि तपाईं संयुक्त अरब एमिरेट्समा एक उत्तम काम खोज्दै हुनुहुन्छ भने। केहि सुझावहरूमा हेर्नुहोस्, र सबैभन्दा राम्रो ठाउँ कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस् विदेश जाने सपना देख्नको लागि.
हामीले संयुक्त अरब अमीरातमा सबै भन्दा राम्रो कार्यहरू लेखेका छौं। अनि निस्सन्देह, सर्वश्रेष्ठहरू सीईओ वा वरिष्ठ प्रबंधन क्यारियर अवसरों। र हाम्रो कम्पनीले प्रवासीहरूलाई कसरी त्यस किसिमको रोजगार प्रस्तावहरू प्राप्त गर्ने मार्गनिर्देशन गर्दछ। अर्कोतर्फ, त्यो कस्तो प्रकारको काम हो?। र यी रोजगार प्रस्तावहरूको लागि कसरी उत्तम दिमाग प्रबन्ध गर्ने? दुबई सिटी कम्पनीले नयाँ जागिर खोज्ने काम गर्दैछ। हाम्रो मार्गदर्शक किन पढ्ने छैन। तपाईं तल केहि राम्रो कम्पनीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तिनीहरू दुबई र खाजा देशहरूमा राम्रो काम गरिरहेका छन्।
हाम्रो कम्पनी सामान्यतया बोल्दै छ तपाईंलाई युएईमा एक वरिष्ठ व्यवस्थापक बन्न मद्दत गर्दछ। अर्कोतर्फ, हामी प्रवासीहरूलाई उनीहरूको सोचको बारेमा छिटो काम पाउनका लागि सहयोग गरिरहेका छौं। यस मार्गनिर्देशनको साथ, तपाईं हुनेछ भर्तीको बारेमा राम्रो जानकारी खोज्नुहोस्। यस समय मध्य पूर्व र खाडी देशहरू एक हुन् नौकरी तलाशने वालों को लागि शीर्ष गन्तव्य। विशेष गरी एमबीए र व्यापार प्रबन्धन शिक्षाको साथ शिक्षित अधिकारीहरूसँग। त्यसोभए तल हेर्नुहोस् तपाईं हाम्रो मार्गदर्शक संग गर्न सक्नुहुन्छ।
सीईओ जॉब मा नौकरिहरु
एक उच्च स्थिति सधैं राम्रो छ ?. सीईओ स्थिति एक जुनून छ, काम होईन। यो पनी वरिष्ठ वरिष्ठ प्रबन्धक हुन वा नचल्ने चर्चा हो। मध्य स्तरमा धेरै व्यवस्थापकहरू निर्णय गर्छन् कि वरिष्ठ प्रबन्धक स्थिति पदमा काम गर्न पछि लाग्नl। सीईओ कार्यहरू एमबीए शिक्षा र पीएचडीका साथका व्यक्तिहरूका लागि राम्रो छन्। ठूलो कम्पनीहरुको कारण वा सानो फर्ममा। निश्चित रूपमा तिनीहरू सबै सीईओ छन्। त्यसैले एक मध्यम आकारको कम्पनीले अधिक वरिष्ठ प्रबन्धकहरूलाई कर्मचारीलाई हेर्छ। त्यहाँ कुनै सार्वभौमिक छैन यस दुबई ब्लगमा सत्य, र मान्छे कहिल्यै थाहा छैन कि यो सर्वोत्तम नेता हुनेछ।
उदाहरणको लागि, मध्य पूर्वमा धेरै निर्वासितहरूले अनुसन्धान गर्छन् र दुबईमा एक सीईओ वेतन जाँच के ठूलो तलब सधैं राम्रो हुन्छ? पक्कै पनि यो हो जब तपाईं निश्चित रूपमा एक छलफल गर्न जब यो निर्णय गर्न आउँछ ठूलो कम्पनीमा वा सानो वा मध्यम आकारको संस्थामा कामको लागि। सीईओ क्यारियर पहुँच गर्न गाह्रो छ, मान्छे को 5% भन्दा कम यो सम्पन्न गर्न को लागी।
सीईओ स्थितिको बारेमा कुनै विश्वव्यापी सत्य छैन। र त्यहाँ छनौट गर्न त्यहाँ फायदे र हानि छ नर्स कर्मचारीहरु देखि माथि देखि वरिष्ठ स्तर सम्म। लामो घण्टा काम, विशेष शारीरिक र सामाजिक बुद्धिको आवश्यक छ। त्यसो भए प्रत्येक व्यक्ति वरिष्ठ ब्यवस्थापक हुन सक्दैन। विशेष गरी यदि तिनीहरू छैनन् राम्रो लेखिएको आवरण पत्र हो। यो अनूठा स्थानको लागि साहस र जुनून चाहिन्छ। अधिकांश मानिसहरू मध्य व्यवस्थापकको स्तरमा उठ्दैछन्।
दुबईमा प्रबन्ध कार्यहरू किन?
नं .1 प्रबंधन नौकरिहरु दुबई को पोजोजोज्स मा
प्रबंधन कार्यहरू, वास्तवमा, प्रायः ठूलो निगमहरूमा छन् अबू धाबी देखि दुबई सम्म। र तिनीहरूमध्ये धेरैजना एक कारणका लागि छन्। वृद्धि सफलता र वृद्धि को माध्यम ले, मध्य प्रबंधकों। वरिष्ठ प्रबन्धकहरूको रूपमा काम गर्दै। र यो सानो कम्पनीको साथ समयको साथमा ठूलो हुन्छ। अनि त्यसो प्रबन्धकहरू अनन्य प्राप्त गर्छन् सुरक्षा नौकरी मार्केट मा फायदे र फीक्स.
दुबई सिटी कम्पनी एक विस्तृत छ अल्जेरियाको निर्यातका लागि गाइड। हामीले प्रबन्धकको हैसियतमा कामको बारेमा सोच्न केही सकारात्मक राख्यौं एक वरिष्ठ प्रबन्धक स्थिति मा। दुबईमा ब्यबस्थापन रोजगारका लागि मुख्य सकारात्मक हुन् उच्च स्तरको अनुभव प्राप्त गर्दै। तपाईं भविष्यको रोजगारी खोजीको लागि तपाईंको राम्रो अनुभव प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
दुबई मा प्रबंधन को काम को बारे मा मुख्य सकारात्मक अच्छे मजदूरी हो। र त्यस राम्रा पाठ्यक्रमहरू र अधिक राम्रो स्थान मा राखिएको व्यक्तिगत ब्रान्ड एक्सप्रेस को रूप मा। त्यसोभए, यदि तपाईं त्यस प्रकारको कामको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले धेरै बोनसहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। मुख्य कार्यकारी अधिकारीको रूपमा, तपाईं काम को एक लामो घण्टा पाउनुहुनेछ तर तपाईं राम्रो जडानहरू प्रबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ। आधारभूत रोजगार रिक्त पदहरू जस्तै होटल क्यारियर सम्म संयुक्त अरब अमीरात मा एमबीए क्यारियर। तिनीहरू सबै तपाईं मध्य पूर्व मा एक प्रबन्धक प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछन्।
संख्या2नेता संरचना को रूप मा दुबईमा प्रबन्धक
प्रबंधन कार्यको लागि ठूलो कम्पनीमा प्रवेश गर्दै, उदाहरणका लागि, हवाई अड्डा को नौकरी मा अबू धाबी र दुबई। निश्चित रूपमा एक ठूलो काम गर्ने मेशिनको अंश बन्छ जुन समयको परीक्षा सामना गर्दछ। वास्तवमा प्रबंधन कार्य प्राप्त गर्न दुबईमा। यसले लामो समय लिनेछ। यस कारणको लागि, हाम्रो टोली छ नयाँ विदेशियहरुको मार्गदर्शन गर्नुहोस्। अधिकतर वरिष्ठ प्रबंधन क्यारियरहरू प्रायः एक पटक लामो समय स्थापना गरिएको छ।
दुबईमा प्रबन्धक बन्नको क्रममा। तपाईंले केहि मापदण्डमा पुग्नु पर्छ। र चीजहरू जुन तपाइँलाई तपाइँको काम के हो भनेर थाहा पाउन सक्षम गर्दछ, तपाईं कसरी आफ्नो विभागमा क्यारियर फिट गर्न सक्नुहुन्छ र प्रमोशनहरूको लागि स्पष्ट मार्गहरू र चाँडै उठ्नुहुन्छ जब तपाईं ढोकामा हिड्नु हुन्छ। यद्यपि यो प्रकारको संरचना सबैको लागि सही मार्ग होइन, यदि तपाइँ जागिर चाहानुहुन्छ भने स्थिरता को एक वृद्धि भाव संग, प्रगति को लागि स्पष्ट परिभाषित र संरचित मार्ग, तब ठूला कम्पनीहरू यी स्पेसहरूमा छन्।
साथै, एक्सप्याट, महिला अब दुबईमा जागिर खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईंको जीवन शैली कस्तो होइन। तपाईं निश्चित रूप देखि एक विशाल मौका हुनेछ जागिर खोज्दै मध्य पूर्वमा।
संयुक्त अरब अमीरात मा एक प्रबन्धक बनने को लागी NO3 लाभ
सामान्यतया, ठूला कम्पनीहरू हुन्छन् लगानीको लागि पैसा उठाउनुहोस्। त्यसैले त्यहाँ मध्य मध्यम स्तरका अधिकारीहरूको लागि एक ठूलो अवसर हो। मुख्य एक प्रबन्धक बन्ने लाभ युएईमा अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर हो। किनभने राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले स्वास्थ्य बीमा जस्ता सुविधाहरू प्रदान गरिरहेका छन्। धेरै विस्तारित र चासोको आन्तरिक नयाँ मानिसहरूलाई प्रशिक्षण.
एक वरिष्ठ प्रबन्धकको रूपमा, तपाईं हुनेछौं यातायात भत्ता वा उबर प्राप्त गर्नुहोस्। त्यो प्रशिक्षण बजेट भन्दा बढी, र धेरै अन्य लाभहरू। यो किनभने ठूलो कम्पनीहरु प्रायः सानो फर्महरू भन्दा ठूलो राजस्व छ। त्यसोभए यो मनमा, निगमहरू यसलाई बनाउन नयाँ कर्मचारीहरूको लागि सजिलो एक पर्यवेक्षक बन्न। अर्कोतर्फ, तपाईंले भुक्तान गर्न आवश्यक छैन लाभ लाभ प्याकेजहरू।
निस्सन्देह, यो केवल जब तपाईं आफ्नो स्थिति को लाभ उठाउन सुरु मात्र गर्दछ। त्यहाँ उपलब्ध छ संयुक्त अरब अमीरात मा बैंकिंग प्रबंधकों को लागि लाभ। कुन कम्पनी र कुन बाह्य वा आन्तरिक स्थिति जुन तपाईं अन्त्य गर्न जानुहुन्छ तपाईंको जीवन सी स्तर स्तरका लागि। हामीले यो याद गर्नुपर्दछ कि युएईमा व्यवस्थापकहरू। निश्चित रूपमा अन्य स्थानहरूमा रोजगार पाउन सक्दछ, उदाहरणका लागि, साउदी अरेबिया, र कतार। त्यसोभए तपाईं दुबई वा अबु धाबीमा कार्यकारी हुनुभयो। को संसार तपाईका लागि खुला रहनेछ.
नम्बर। NNUM क्यारियर परिवर्तनको लागि अधिक सम्भावना
जबकि तपाईंको भूमिका एक ठूलो कम्पनी मा धेरै विशिष्ट कम्पनीहरु संग हुन सक्छ। सीईओ वा प्रबन्धक निदेशकको रूपमा कामको खोजी गर्दै समय लाग्न सक्छ। वास्तविकतामा, व्यवस्थापन स्तरबाट स्थिति परिवर्तन गर्न यो धेरै सजिलो छ। अर्कोतर्फ मध्य म्यानेजरहरू प्राय: जसो खोज्दै कामको नयाँ क्षेत्र अन्वेषण गर्नुहोस् कम्पनी पूर्ण रूपमा नछोडीकन। यो दिमागमा साथ, तपाईं एक कार्यकर्ताको रूपमा तपाईंसँग अधिक हुनेछ क्यारियर परिवर्तनको सम्भावना.
एक हुन CEO, तपाईं प्रोजेक्ट प्रबन्धक, त्यसपछि अपरेसन हुनको लागी बिक्री कार्यकारी हुन जाँदै हुन सक्नुहुन्छ निर्देशक र सी स्तर स्तर सम्म पुग्छ। वा तपाइँ ग्राफिक डिजाइनरको रूपमा पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र उठ्न सक्नुहुन्छ एक वरिष्ठ बजारको रूपमा काम गर्दै। तपाइँ अझै पनि क्यारियर परिवर्तनको लागि थोडा शिकार गर्न आवश्यक हुन सक्छ। र धेरै वर्षको लागि न्यून स्थितिको लागि कडा मेहनत गर्नुहोस्।
योग्य तपाईको क्यारियर परिवर्तनको लागि योग्य हुनुहुन्छ। धेरै जसो केसहरू वरपर लिन्छन् पुग्न न्यूनतम 10 वर्ष। तर यदि तपाई राम्रो संगठनको लागि काम गरिरहनु भएको छ भने यो निश्चित रूपले प्लस हो। व्यवस्थापनको लागि पदोन्नती हुन भन्दा पनि दुबईमा काम। सबै भन्दा राम्रो प्रबन्धकले चिन्ताको विषय यो हो। अर्कोतर्फ, दुबईमा व्यवस्थापन कार्यहरू साधारण कर्तव्यहरू भन्दा धेरै बढी हुन्छन्।
नहीं .5 नयाँ कम्पनीहरु र स्टार्टअप
ठूलो कम्पनीको लागि काम गर्दै सबै घाम र इन्द्रेणीहरू होइनन्। यद्यपि स्टार्ट-अप कम्पनीहरूका लागि काम गर्दै तिनीहरूका आफ्नै फाइदाहरू छन्। उदाहरण को लागी, किनकि तपाई दुबई कम्पनीलाई सार्नुहुन्छ सुरूवात स्थिति बाट राम्रो व्यवसाय सम्म। तपाईंसँग कसरी कार्यकारी कार्यकारी कम्पनीको रूपमा पूर्ण नियन्त्रण हुनेछ। प्रत्येक विभागको प्रगति के हो? र तिम्रो कर्मचारीहरु प्रत्येक महिना कितना काम गर्छन।
जब तपाईं प्रलोभनमा पर्न सक्नुहुन्छ ठूलो बहुराष्ट्रिय निगममा जानका लागि। तपाईंले यी साना कम्पनीहरूलाई विचार गर्नुपर्छ। वा एक startups संगठन वा उद्यम कोष लगानी कम्पनीहरु। सबै भन्दा राम्रो कम्पनी एक प्रबन्धक को रूप मा स्टार्टअप कम्पनीहरु संग एक नौकरी प्राप्त को लागि Angel.co छ। यो कम्पनी दुनिया भर मा भर्ती गर्दै छन् !.
नम्बर6सी-स्तर परिवर्तनहरू ढिलो भयो
सी-स्तर कार्यकारी बन्नको लागि तत्पर हुनुहुन्छ ?. ठूलो कम्पनीको लागि काम राम्रो छ। नकारात्मक पक्षमा, बीचको स्तर सम्म सी-स्तर एक लामो बाटो हो। किनभने सी-स्तर अधिकारीहरूको लागि परिवर्तन सुपर लामो छ। तपाईं धैर्य हुनु आवश्यक छ, केहि निर्णयहरू3वर्षको समय लिँदै छ। केही संग पनि दुबईमा कम्पनीहरू। अझै पनी लामो बाटो छ अगाडी ब्यूँझनुहोस् वा स्थानीय कर्मचारीहरू सुरू गर्न संयुक्त अरब अमीरात मा प्रबंधन स्तर मा।
तपाईले काम गर्नुभएको कम्पनीले नयाँ विचारहरूको लागि खुला छ भने पनि। अझै, तपाईंसँग लामो-अवधिका लक्ष्यहरू हुनु आवश्यक छ। धेरै राम्रो प्रगति क्यारियर र मानव संसाधन निर्देशक बोर्ड विभागलाई फरक मोडेलमा सर्न मनाउन। र तपाईंलाई नयाँ रणनीतिमा लैजान तपाईंसँग अनुगमन गर्नुहोस्। र आफ्नो स्थिति परिवर्तन गर्नुहोस् सी-स्तर कार्यकारी स्तरको लागिनयाँ स्थितिको लागि नयाँ पदोन्नति धेरै समय लाग्न सक्छ। संयुक्त अरब अमीरातमा धेरै नयाँ नितान्तहरू कम्पनीमा आफ्नो मार्क छोड्न चाहानुहुन्छ। तर यो धेरै समय लाग्दैछ, उनीहरूले न्यूनतम5सम्म7वर्ष सम्म काम गर्छन्।
यद्यपि यो हुन सक्छ बढी सीधा रहनुहोस् र ठूलो भन्दा सानो कम्पनीको लागि सजिलो। तपाईंले सम्झनु पर्दछ कि कम्पनीले केहि समयको लागि गरेको छ, यो चीजहरू सम्पन्न गर्ने आफ्नै तरिकामा हुन्छ। साथै, तपाईंले गर्न सक्नुहुने सम्पूर्ण प्रक्रिया द्रुत गतिमा पनि दुबईमा साक्षात्कारमा हिड्न खोज्नुहोस्.
No.7 प्रबन्धकहरूले तपाईंको सफलतालाई प्रभाव पार्छ
खैर, प्रबन्धकहरूले सधैं प्रभावकारी बनने आशा गर्छन्। जब तिमी आफैलाई घेरौ सम्पूर्ण संसारबाट सकारात्मक व्यक्तिहरू। अन्य प्रभावकर्ता निश्चित रूप मा तपाइँ तपाइँको सफलता को लागी मद्दत गर्दछ। मुख्य मुद्दा यो हो कि तपाईंको सफलता र खुशीको लागि प्रेरणा। तपाइँ कहिले पनि थाहा सक्नुहुन्न कि यसले कडा मेहनतको साथ राम्रो-स्तरमा कार्य-जीवन संतुलन राख्दछ। नकारात्मक पक्ष मा दुबई मा सबै प्रबन्धक हुन सक्दैन सीईओ कार्यहरू प्राप्त गर्न निर्धारित। केही व्यक्तिहरू डिसफंक्शनल टोलीसँग लामो समयसम्म काम गरिरहेका छन्। र उनीहरूले ठूलो मूल्य तिर्दै छन्। किनकि यस किसिमको मनोवृत्ति तपाईंको कार्यबलको गुणस्तरलाई तल ल्याउँछ.
जब तपाईं खराब व्यवहार भएको व्यक्तिहरूसँग काम सुरु गर्नुहुन्छ। निश्चित रूपमा थप घण्टामै राख्नु पर्दैन तपाई कत्तिको काम गर्नुहुन्छ। तर तपाईं दुबईमा ब्यबस्थापकको रूपमा तपाईंलाई प्रभावकार हुन आवश्यक छ र तपाईंको गन्तव्यको मालिक हुनुहुन्छ। निश्चित रूपले, यसले असर गर्छ कम्पनी भित्र माथि बढ्ने तपाईंको संभावनाहरु। एउटा टोलीको साथ राम्रो रिपोर्ट बटुल्नुहोस्। तिनीहरूलाई कामको नैतिकता र प्रयास वृद्धि गर्न पाउनुहोस् किनभने यो अविश्वसनीय रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। निश्चित रूपमा, यदि तपाईं आफ्नो गृहकार्य गर्नुहुन्छ भने। तपाईंको टोली वा विभाग तपाईंको पर्यवेक्षण अन्तर्गत। तपाईंलाई माथि उठाउनेछ र कुनै पनि बिन्दुमा तपाईंलाई तल झारिने छैन.
त्यहाँ उपलब्ध छ दुबई र अबू धाबी मा काम। प्रभाव पक्कै तपाईंलाई एक ठूलो काम भूमि मा मद्दत गर्न सक्छ। तपाईंको आफ्नै सफलताको प्रबन्ध गर्नु वास्तविकतामा छ सबैको बारेमा अर्को व्यक्तिले तपाईंलाई काममा लिने प्रभाव पार्छ.
दुबईमा ब्यबस्थापन ब्यबसायका लागि निष्कर्ष
ठीक छ, गरौं यसलाई दुबईमा प्रबन्ध गर्नुहोस्। तिनीहरू सजिलो छैन भनेर। प्रायः नौकरी चाहने व्यक्तिहरु लाई सही कौशल चाहिन्छ। र सी-लेवलका लागि अपरेसन प्रबन्धक, सीईओ, व्यवस्थापन निर्देशक पद जस्ता। साक्षात्कारहरू सुपर जटिल छन्। र वातावरण परिवर्तन गर्न यो कहिले पनि सजिलो भएको छैन। पनी देश परिवर्तन गर्नु पनि निकै कठिन काम हुन सक्छ कि तपाईं एक सकारात्मक तरिका मा व्यवस्थित छैन। विशेष गरी युरोप बाट or मध्य पूर्व को लागि नौकरी तलाशने वाला एशिया.
त्यसैले, यो सुरू गर्न अझ राम्रो छ प्रवेश स्तरको स्थितिहरू। त्यसपछि बिस्तारै मध्य प्रबन्धकको स्थानको लागि अगाडि बढ्दै। यो बाटो यो तपाइँको लागि अधिक सुरक्षित हुनेछ। अवश्य गुगल र फेसबुक जस्ता कम्पनीहरूमा। सामान्यतया, तपाई अन्तर्वार्ता प्रक्रिया पारित पछि, र यदि तपाईं हुनेछ यस्तो आनन्दित कामको लागि नियुक्त गरियो। तपाईं धेरै पैसा बनाउन हुनेछ। तर त्यहाँ पुग्न गाह्रो छ, यसैले अधिकांश व्यक्तिहरू यसमा रहन्छन् तिनीहरूले पदोन्नति सम्म काम.
तर दुबई शहर कम्पनी सँधै प्रवासीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दछ। हामी तपाईलाई सब भन्दा राम्रो सम्भव रोजगारीको प्रस्ताव र दुबईमा उत्तम ब्यबस्थापन रोजगार रोजगारीको लागि चाहन्छौं। यसैकारण हामी सँधै युएईमा हाम्रो ब्लग पोष्ट अपडेट गर्दैछौं। र यो दिमागमा राख्दै, हामी प्रयास गर्दैछौं तपाईलाई मध्य पूर्वमा रोजगारदाता बन्न सहयोग पुर्‍याउन। अर्कोतर्फ, नबिर्सनुहोस् त्यो पनि कम्पनीहरूमा सउदी अरब को भर्ती रेटिङ.
दुबई शहर कम्पनी दुबईमा राम्रो गाईडहरू प्रदान गर्दै। हाम्रो टोलीले हाम्रो लागि प्रत्येक भाषाको जानकारी थप्न निर्णय गर्यो Dubai दुबई। त्यसो भए, यो दिमागमा राखेर, अब तपाइँ गाईडहरू पाउन सक्नुहुन्छ, सुझावहरू र संयुक्त अरब एमिरेट्समा रोजगार तपाईंको आफ्नै भाषाको साथ।